Nobody Sleeps in the Woods Tonight (2020) | MM Movie Store
စမတျဖုနျးတှေ၊ဂိမျးတှစှေဲနကွေတဲ့ ဆယျကြျောသကျလူငယျတှကေိုနညျးပညာတှနေဲ့ဝေးဝေးနပွေီး သဘာဝတရားကိုခံစားနိုငျအောငျ စီစဥျပေးထားတဲ့ offline campလေးတဈခုရှိပါတယျ။
ဒီcampလေးထဲမှာဆိုရငျ ဖုနျး၊လပျတော့စတဲ့ လြှပျစဈပစ်စညျးတှလေုံးဝယူမလာရဘဲ စီစဥျပေးထားတဲ့အတိုငျး အုပျစုငယျလေးတှဖှေဲ့ပွီး activityတှလေုပျရပါတယျ။နညျးပွ”မစ်စ အီဇာ”ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့လေးကတော့ တောနကျထဲကို ခွလေငျြခရီးထှကျလာကွပါတယျ။
တောထဲမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မိတျဖှဲ့ရငျး စလိုကျရနျဖွဈလိုကျ၊ညဘကျမှာ မီးပုံဖိုရငျးသီခငျြးတှဆေိုလိုကျနဲ့ ပတျဝနျးကငျြကိုသတိမမူမိဘဲ ပြျောရှငျနကွေပါတယျ။မနကျလငျးလို့ခရီးဆကျထှကျတော့မယျ့အခြိနျမှ အဖှဲ့ထဲကကောငျလေးတဈယောကျ ပြောကျဆုံးနပွေီးသှေးကှကျအခြို့ကနျြနခေဲ့တဲ့အတှကျ လူစုခှဲပွီးလိုကျရှာကွညျ့ကွတဲ့အခါမှာတော့……
တောနကျထဲမှာရောကျနတေဲ့အပွငျ ဆကျသှယျစရာဖုနျးလညျးပါမလာကွတဲ့သူတို့တဈတှေ တောထဲမှာ မထငျမှတျထားတဲ့ဘယျလိုအန်တရာယျမြိုးနဲ့ကွုံတှရေ့မလဲဆိုတာ ကွညျ့ရှူခံစားလိုကျကွပါဦး….
စမတ်ဖုန်းတွေ၊ဂိမ်းတွေစွဲနေကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကိုနည်းပညာတွေနဲ့ဝေးဝေးနေပြီး သဘာဝတရားကိုခံစားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ offline campလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒီcampလေးထဲမှာဆိုရင် ဖုန်း၊လပ်တော့စတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေလုံးဝယူမလာရဘဲ စီစဉ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း အုပ်စုငယ်လေးတွေဖွဲ့ပြီး activityတွေလုပ်ရပါတယ်။နည်းပြ”မစ္စ အီဇာ”ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့လေးကတော့ တောနက်ထဲကို ခြေလျင်ခရီးထွက်လာကြပါတယ်။
တောထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိတ်ဖွဲ့ရင်း စလိုက်ရန်ဖြစ်လိုက်၊ညဘက်မှာ မီးပုံဖိုရင်းသီချင်းတွေဆိုလိုက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိမမူမိဘဲ ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။မနက်လင်းလို့ခရီးဆက်ထွက်တော့မယ့်အချိန်မှ အဖွဲ့ထဲကကောင်လေးတစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးနေပြီးသွေးကွက်အချို့ကျန်နေခဲ့တဲ့အတွက် လူစုခွဲပြီးလိုက်ရှာကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတော့……
တောနက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အပြင် ဆက်သွယ်စရာဖုန်းလည်းပါမလာကြတဲ့သူတို့တစ်တွေ တောထဲမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှူခံစားလိုက်ကြပါဦး….
9-1-1 Lone Star (Season 1) ၊ အပိုငျး (၆)